Referendum na agha Ukraine - World March
Mbido » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Ukraine agha referendum
19 / 04 / 2022 site Antonio Gancedo
Ntụgharị aka European na agha Ukraine: ole ndị Europe chọrọ agha, mweghachi na ike nuklia?
Anyị nọ n'ọnwa nke abụọ nke esemokwu, esemokwu na-eme na Europe ma nke mmasị ya bụ mba ụwa.
Esemokwu ha na-akpọsa ga-adịru ọtụtụ afọ.
Esemokwu nke nwere ike ịbụ agha ụwa nke atọ nke atọ.
Mgbasa mgbasa ozi agha na-agbalịsi ike n'ụzọ ọ bụla gosi na ntinye ngwa ọgụ na mkpa ọ dị ka mba Europe tinye nnukwu ego ọha na eze na-emefu iji nweta ngwá agha.
Ma ụmụ amaala Europe hà kwenyere? A naghị enyocha agha n'ụlọ na olu ụmụ amaala Europe, ma ọ bụ nke ka njọ, na-ezobe ma ọ bụrụ na ọ bụ n'èzí isi.
Ndị na-akwalite mgbasa ozi euroforpeace malite nyocha nke Europe a na ebumnuche nke inye ndị na-ajụghị olu olu, na ebumnuche nke ịgụta anyị, ịghọta mmadụ ole na Europe kwenyere na ike nke ogwe aka na ole ndị kwenyere na ike nke enweghị ike ime ihe ike bụ nanị ya. ngwọta maka ọdịnihu nkịtị.
Nnyocha ahụ dị n'asụsụ anọ ma na-achọ iru ọtụtụ nde votu gafee Europe iji weta nsonaazụ na nzuko omeiwu Europe ma kwupụta na ndị mmadụ bụ ndị ọchịchị ọbụna mgbe ha na-ahọrọ ime ihe ike, agụmakwụkwọ na ahụike, kama agha na ngwá agha.
Anyị na-akpọ ndị agha niile na-eme udo na ndị na-adịghị eme ihe ike, bụ ndị kwenyere na Europe nwere ike ịbụ onye mmeri nke udo ma ọ bụghị agha agha, ka ha sonyere ndị na-akwalite ma gbasaa referendum ọnụ ọnụ ka o wee ruo ụmụ amaala Europe niile, n'ihi na olu anyị bara uru. !
Anyị nwere ike ịchọpụta na site n'ịgwa onwe anyị na anyị bụ ike kasịnụ, anyị bụ nnukwu mmegharị nke Europe nke na-ejikọta na-ekwu na ndụ bụ uru kachasị ọnụ ahịa nakwa na ọ dịghị ihe dị n'elu ya.
Anyị tụkwasịrị ya obi… ị nwekwara ike ịtụ vootu!
Anyị na-ekele Pressenza International Press Agency ugbua Europe maka Udo inwe ike ịkọrọ isiokwu a banyere mkpọsa "European referendum na agha na Ukraine"
Europe maka Udo
Echiche nke ime mkpọsa a bilitere na Lisbon, na European Humanist Forum nke November 2006 na otu ọrụ nke Peace na Nonviolence. Dị iche iche òtù abuana na dị iche iche echiche converged nnọọ n'ụzọ doro anya na otu okwu: ime ihe ike na ụwa, nloghachi nke ngwa agha nuklia, ihe ize ndụ nke a nuclear ọdachi na mkpa ngwa ngwa ịgbanwe N'ezie nke ihe. Okwu Gandhi, ML King na Silo gbadara n'uche anyị mkpa ọ dị inwe okwukwe na ndụ yana ike dị ukwuu nke enweghị ike ime ihe ike. Ihe atụ ndị a kpaliri anyị. E gosipụtara nkwupụta a na Prague na February 22, 2007 n'oge ọgbakọ nke òtù Humanist haziri. Nkwuputa a bụ mkpụrụ nke ọrụ nke ọtụtụ ndị mmadụ na òtù dị iche iche na-agbalị ịmepụta echiche nkịtị na itinye uche na okwu nke ngwá agha nuklia. Mgbasa ozi a ghere oghe nye mmadụ niile, onye ọ bụla nwere ike inye onyinye ha iji zụlite ya.